Taariikhda Qaramada Midoobay - Wikipedia
Taariikhda Qaramada Midoobay
Taariikhda Qaramada Midoobay waxay ka soo bilaabantaa Dagaalkii Labaad ee Aduunka. Wakhtigaas wixii ka dambeeyay xubnaha iyo shaqada ururku wuu balaadhay waxayna maanta gaadhay dhamaan caalamka oo dhan, ayada oo qarniga 21aad noqotey meel kulmisa dhamaan madaxda aduunka.
Sida taariikhda lagu hayo hindisaha iyo magaca Qaramada Midoobay waxaa horaantii iska lahaa madaxweynihii wadanka Maraykanka Franklin Roosevelt wakhtigaasi oo uu rabay in lagu magacaabo xulafadii Isbaahaysiga. Fikradaasi waxaa ku raacay Ra'iisal wasaarihii Boqortooyada Biritayn kaasi oo socdaal shaqo ku joogay cariga Maraykanka wakhtigaasi 1941. Si kastaba ha ahaatee sanadihii xigay waxaa ereyga Qaramada Midoobay aad u isticmaalayay xulafadii isbaahaysiga ee dagaalka kula jirtey Jarmalka.
1 Ku Dhawaaqida QM (1942)
2 Qorshaynti QM
3 Aasaasitaanka QM
5 Xarumaha QM
Qiyaastii 1–2 Janaayo 1942, ayaa lagu dhawaaqay Qaramada Midoobay wakhtigaasi ooy saxeexeen sharciga ururkaas ilaa 26 wadan. Badhtamigii 1945kii waxaa heshiiska saxeexay 21 wadan oo kale kuwaasi oo sii xoojijiyay hanoqaadkii ururka.
Heshiskaasi wuxuu ku bilaabmayay sidan:
WAXAAN KU DHAWAAQAYNAA ISKU XIDHKA IYO MIDNIMADA MARAYKANKA, BOQORTOOYADA BRITAIN OO LA SOCOTO WAQOOYIGA IRELAND, MIDOWGA SOOFIYEETI, SHIINAHA, AUSTRALIA, BELGIUM, KANADA, COSTA RICA, CUBA, JEKOSLOVAKIA, JAMHUURIYADA DOMINIKA, EL SALVADOR, GIRIIGA, GUATEMALA, HAITI, HONDURAS, HINDIYA, LUXEMBOURG, NETHERLANDS, NEW ZEALAND, NICARAGUA, NORWAY, PANAMA, POLAND, KOONFUR AFRICA, YUGOSLAVIA
Markeey taariikhdu ahayd Abriil 25, 1945, waxaa magaalada San Fransisko ka bilaabmay Shirkii Caalamiga ee Qaramada Midoobay halkaasi ooy ku kulmeen wadano gaadhay 50 dal iyo tiro badan oo ururo caalami ah. Hadaba 26 Juun, labo bilood ka dib markii shirka la bilaabay, ayaa 50kii wadan dhamaantood saxeexeen Dastuurka Qaramada Midoobay. Ka dib markii ay dib u eegis ku sameeyeen wadanada Shiinaha, Midowga Soofiyeeti, Boqortooyada Biritayn, Maraykanka iyo tiro kale oo wadano ah ayaa 24 Oktoobar 1945, waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay jiritaanka Ururka Qaramada Midoobay.
Hoos waxaa ku qoran taariikhda wadanada xubinta ka ah Qaramada Midoobay ay soo gudbiyeen warqadii ogolaanshaha ururka:
Ururka Qaramada Midoobay wuxuu qabtey hoowlo aad u balaadhan; kuwaasi waxaa ugu muhiimsan horumarinta xidhiidhka bulshooyinka, daryeelida xuquuqda Aadamaha, horumarinta dhaqaalaha, dabargoynta gumeysiga, caafimaadka iyo waxbarashasa, daryeelka qoxootiga iyo ganacsiga.
Rajada ugu wayn ee laga aaminsan yahay Qaramada Midoobay waa ineey baajiso (joojiso) inuu dhaco daagaal wayn (dagaalka sadexaad), kaasi oo baabi'in kara dadka iyo duunyada caalamka.
Badhtamihii Diisambar 1945, ayaa Golaha Guurtida Maraykanka iyo Aqalka Wakiiladu u codeeyeen in Ururuka Qaramada Midoobay laga codsado ineey Xarunta Sare ka dhisato wadanka Maraykanka. Arintaasi way aqbashay Qaramada Midoobay, waxayna deegaan ka salaxatay bariga caasimada New York halkaasi oo ay ku iibsatey lacag dhan US $8.5 milyan oo ahayd lacag deeq ah. Dhismaha oo socday labo sano (1949 ilaa 1950) waxaa la furay Xarunta Sare Qaramada Midoobay Janaayo 9, 1951, inkastoo la dhamaystiray dhismaha bishii Oktoobar 9, 1952.
Inkastoo xarunta ugu muhiimsan ku taalo caasimada New York, ururku wuxuu xafiisyo waaweyn ku leeyahay Jeniifa, Heeg, Fiyeena, Nayroobi iyo meelo kale oo badan.
Hay'adaha iyo Wakiilada Qaramada Midoobay
Qorashaha hirgalay ee Qaramada Midoobay
UN Intellectual History Project Archived Diseembar 18, 2017 // Wayback Machine – Academic study of UN history
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Taariikhda_Qaramada_Midoobay&oldid=217628"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 Sebteembar 2021, marka ee eheed 11:54.